Iwo matatu akanakisa email mamaneja eIOS | IPhone nhau
Maneja weemail nhasi chishandiso chakakosha kuvanhu vazhinji, kunyanya avo vanogashira yakanyanya huwandu hwekutaurirana pazuva. Nekudaro, iyo Meseji kunyorera iyo iOS inouya yakaiswa kubva kufekitori iri pachena haina kukwana kune avo vane yakakosha chishandiso chebasa ravo rehunyanzvi muemail. Nekudaro, kune iyo muApple App Store dzakateedzana dzimwe nzira dzatisingakwanise kupotsa kana iwe uchida kubata yako email kunge pasina mumwe munhu, Ngatitarisei kuti ndeapi matatu maneja akanaka emaimeri eIOS ye iPhone News.
Tinotanga neiyo yakandinakira, uye iyo yandinoshandisa izvozvi. Kiyi yeNewton ndeyekuti iri mugore, nenzira iyi inovimbisa kuti iwe uchagamuchira zvese zviyeuchidzo zvako uye uchaita chikamu chebasa rako. Iyo ine inoshamisa kusangana pamwe neIOS uye inobvumira pakati pezvimwe zvinhu masiginecha eHTML. Nekudaro, iyo poindi isina kunaka yaNewton, kunyangwe iri yekushandisa yakakwana, ndeyekuti inoda kunyoreswa kwakabhadharwa izvo inogona kusvika ku € 49,99 gore. Ndosaka Newton achikurudzira kune avo vane hunyanzvi email chishandiso.
NaNewton tinokwanisa kuronga kutumira maemail, uye kutogamuchira zviziviso zvekuverenga. Chishandiso chehunyanzvi chiri kumusoro kwebasa racho. Iyo ine vhezheni ye macOS uye PC.
Kushandiswa kwe Microsoft. Iyo yakashamisa munhu wese nerufaro rwayo rwekushandisa, kureruka kwayo uye nekukurumidza kwainogadziridza kuisa yazvino iOS nhau. Pasina kupokana, yemahara emahosi manejimendi manejimendi ekushandisa ndiyo yandinofarira zvakanyanya. Iyo zvakare inobvumidza HTML tsamba siginecha uye inosanganisira yakawanda yesarudzo yatinowana muwebhu vhezheni yeAptlook. Chikamu chakanakisa ndechekuti mahara.
Ichi chishandiso zvakare chiri muchinjikwa-chikuva, icho chinogona kuve chinonakidza chaicho. Iyo yakajeka intuitive dhizaini uye mushandisi interface, saka zvinokurudzirwa kwazvo. Izvo zvakare zvemahara kune iOS uye tinokurudzira kuti iwe uzviedze kana maviri apfuura asingakunyengetedze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Iwo matatu akanakisa email mamaneja eIOS
Ndine urombo asi ndinosiyana muchinyorwa chino ... kwete nekuti mamaneja aya haana kunaka, asi nekuti Airmail inofanirwa kunge iri YES kana HERE mune irwo runyorwa ... Ndakaedza ZVESE uye Airmail zvakaenzana kana ikasapfuura, uye kunyanya kune Outlook.
Hapana munhu anoyeuka myMail (unogona kudzima kushambadzira kana rutsigiro nekuona iwo mabhana). Ndinoshuva kuti vese mamaneja eposta vangateedzera iyo. Shuwiro yakanakisa
Sei usingaise Airmail? Zvinopfuura zvese nekure. Handeyi nazvo ...
Ivo vakanaka email vatengi (ini ndakavaedza vese) asi pane imwe inoburitsa zvakanyanya uye inoita mutsauko nekuda kwekushandisa kwayo, kushanda uye runako; ichi ndicho Unibox. Iyo inobatanidza maemail nemugashiri uye inogadzira tambo zvakakwana.
Ndakaedza akawanda emaimendi vatengi uye, pasina mubvunzo, ini ndinoda UNIBOX, zvese zveMacOS neIOS.
Pindura kuna franctastic
Chinyorwa chinoodza moyo chaizvo ... rega nditsanangure ...
Kutanga, zvakanyanyisa, hapana nguva iyo munyori anoongorora mune - zvirokwazvo-- akakosha maitiro eemaimenja mameseji eIOS uye anovaita kuti vamire kubva kune default mutengi wepuratifomu akadaro.
Kushinga kwakadai: "Iwo matatu akanakisa mamaneja mameseji eIOS", kwekuravira kwangu, zvaizoda kuferefetwa kweDEEP uye kuenzanisa pakati pezvakataurwa mapuratifomu, kuitira kuti munyori anyengetedze vaverengi nezvezvaanotaura, uye kwete kugara muTotally "decaf" chinhu kutaura zvishoma.
Ndinoisa zvandinotaura pamusoro pei? Mune zvinotevera:
- Ichokwadi chekuti mutengi weemail ari mugore hazvireve kuti ziviso dzese dzichagashirwa CHOKWADI ICHO CHETE. Iyo tsamba mutengi MAIL anozviita.
- Iyo ine inoshamisa kusangana pamwe neIOS? Iyo MAIL mutengi hongu futi.
- Masiginecha muHTML, ronga kutumira maemail uye ugamuchire kuziviswa kwekuverenga? Mapoinzi mukufarira NEWTON, asi bhadhara € 49.99 pagore nezvayo?
- Kusununguka kwekushandisa, kureruka? MAIL anayo.
- HTML tsamba masiginecha? Nongedzera mukufarira OUTLOOK
- Mahara? MAIL mahara
- Multi chikuva? Nongedzera mukufarira SPARK.
- Dhizaini uye mushandisi interface? MAIL haina kushata uye zvakare iri intuitive. Kukurudzira app yekushandisa NYANZVI chete nekuda kwekugadzirwa kwayo uye chinongedzo zvinoita kunge zvine njodzi kwandiri.
ZVINOKOSHA! IN NO WAY ndiri kukodzera izvi ZVAKANAKA sarudzo (ziso: OPTIONS) yemamaneja maneja! Chokwadi vane zvakawanda maficha uye mashandiro anoita kuti akurudzirwe zvakanyanya kune vashandisi vanozvida uye kuti munyori nekuda kwekushayikwa kwenguva kana chishuwo haana kunyatsoongorora kuti aite ichi chinyorwa chakakosha!
Kwazisai uye ndinovimba kuti muzvinyorwa zvinotevera zvinhu zvinorapwa nenzira iri nani uye nenharo dzakanaka!
Nei uchiisa zvinyorwa kuisa? Ivo vanoisa zvakapusa zvinyorwa vasingazive zvavari kutaura nezvazvo…. iyo yakanakisa email nhasi ndeyekure AIRMAIL !!!!!!!!! Usati wateedzera uye kunama chinyorwa, ita ongororo yako !!!!!!! Ndokusaka peji rino riine vashoma uye vashoma vaverengi! Kusemesa kwezvinyorwa, uko ivo vasingatombo tora nguva yekuongorora ruzivo rwakadai! newton, oitlook.spark maneja akanakisa ???? HA HA HA HA HA HA HA
Nei hurumende dzese dzichisarudza Apple kunze kweUnited States?